Bashir Aman oo Sweden ka aasaasaya bank Islaami ah | Somaliska
Bashir Aman oo ah ganacsade Soomaaliyeed oo ku nool Sweden ayaa dirsaday codsigii ugu horeeyay ee lagu aasaasayo Bank Islaami ah. Bankigaan ayaa haddii la ogolaado waxa uu noqonayaa kii ugu horeeyay ee Islaami ah ee laga hirgaliyo wadanka Sweden. Bashiir ayaa idaacada Sweden u sheegay in Bankiga uu sameynayo uusan qaadan doonin isla markanaana bixin doonin ribada.
– Nidaamkeena ganacsiga kuma dhisna ribada sida ay bankiyada kale sameeyaan balse waxa uu ku dhisanyahay wada ganacsi. Taasi ayaa wada anfacaysa macaamiisha iyo Bankiga. ayuu yiri Bashir Aman.
Codsiga uu Bashir Aman u diray hay’ada baaritaanka dhaqaalaha (Finansinspektionen) ayuu ku cadeeyay in Bankigaan uusan waxba ku darsan doonin ribada, maadaama ay taasi Xaraam tahay. Balse mamnuuc ma ahan in Bankiga uu faa’iido sameeyo. Tusaale, dadka lacagta u taalo bankiga ayaa waxay ka midyihiin milkiilayaasha iyaga oo wax ka qaybsan doona faa’iidada bankiga. Ama haddii qof uu doonayo in uu guri iibsado, ayuu marka hore bankiga soo iibsanayaa guriga, isagoo ka dibna macaamiisha ka sii iibanaya.
Codsiga bankiga islaamiga ah ayaa hada horyaala Finansinspektionen, iyadoo Martina Jäderlund oo ka mid ah shaqaalaha Hay’ada ay u sheegtay idaacada in ay macquul tahay in la ogolaado bankigaan maadaama bankiyada ay ku dhisanyihiin nidaamyo kale duwan. Furashada Bank ayaan sahal ahayn, iyadoo ay jiraan shuruudo adag oo horyaala asaaska bankiyada, Waxaa ugu yaraan looga baahanyahay cida furanaysa Bank in ay haysato lacag gaaraysa 47 milyan oo karoon balse Bashiir Aman ayaa sheegay in uu haysto balan qaad gaaraya 250 milyan oo karoon, taasoo kaga imaanaysa Bankiyo ku yaala wadamada Islaamka sida Malaysia, Saudi Arabia, Kuwait, Qatar iyo shaqsiyaad.
war hedhe hadi u bankigu kuri so ibsado uu iga sii ibiyo , waxay kaa dhigan tahay lacag siyado ah ayu saranaya kadibna waa dilaal cml , maxay markaa ribada kaga duwan tahay bankiga cadiga ah madamo u bankigu ku sinayo lacagta guriga kadibna u ku saranayo ribo oo laa dhigmata dilaalka ? aya ii fahansiin kara tack
Asc “Goob” walaal waxay kukaladuwanyihiin. Dee markaad wax iibiso waxaadheleysaa faaiido aad saaratay sheygii oo go,an. waana beec iyo iibsi. taasina way banaantahay. laakiin ribadu waa lacag aad lacag kafaaiidayso adoon waxshaqo ah galin. taasi waxaa siidheer mudada uuqofku kaaqabo lacagtaas waykuusii kordhaysaa. Tan kalaiibsiga ah se, qofka wax go,an baad kasiineeysaa oo markaad kala iibsataana waad kukalatageeysaan.
واحل الله البيع وحرم الربا. saasaana ilaahay uxaaraantimeeyey in aadan qofka baahidiisa laga faaiidin.